Mareykanka oo 14 ruux eedeeyay - BBC News Somali
Mareykanka oo 14 ruux eedeeyay
5 Agoosto 2010
Image caption Eric Holder
Hadal uu maanta jeediyay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Mareykanka, Eric Holder, ayaan idiin soo koobnay:
Maanta ayay dowladda Mareykanku soo saartay magacyada 14 ruux oo lagu eedeynayo falal argagixiso oo ah in ay lacag, shaqaale iyo adeeg ay u fidiyeen kooxda Shabaab, oo ah urur argagixiso oo ka hawlgala Soomaaliya, kuna xiran al Qaacida.
Laba dadkaa ka mid ah waxaa lagu xiray Mareykanka.
Eedeymahaas iyo qabqabayashada oo ka dhacay gobollada Minnesota, Alabama iyo California, ayaa lagu ogaaday xog hor leh oo ah hawl halis ah oo lacag iyo dagaalyahanno ka imaanaya Magaalooyin Mareykan ah u gudbinayay Shabaab.
Minnesota waxaa laga soo saaray dacwad ka dhan ah 10 nin oo lagu eedeynayo falal argagixiso oo ah in ay ka tageen Mareykanka si ay ugu biiraan Shabaab.
Toddoba nimankaas ka mid ah hore ayaa loo eedeeyay.
Agaalada Minnessota oo keliya, 19 ruux ayaa la eedeyay intii lagu jiray baaritaankan.
Sagaal ka mid ah waxaa la qabtay iyaga oo jooga Mareykan iyo dibaddaba, shan ka mid ahina wey qirteen dembigii lagu eedeeyay.
Toban ka mid ah dadka la eedeeyay ma xirna, waxaana la rumeysan yahay in aanay joogin areykanka.
Waxaa iyagana kiis kan ka gooni ah lagu eedeeyay laba ruux oo Mareykan ah, waa Omar Shafik Hammami oo degganaa Alabama iyo California iyo Jehad Serwan Mostafa in ay taageero maaddi ah u gudbiyeen Shabab. Labadaba waxaa la rumeysan yahay in ay joogaan Soomaaliya oo ay u dagaallamayaan Shabaab.
Hammami waxaa lagu arkay dhowr video oo dacaayad ah oo Shabaab o daneynaya oo caalamka oo dhan la gaarsiiyay waxaana la rumeysan yahay in uu Shabaab u hayo xil hawlfulineed.
Ugu dambeyntii Amina Farah Ali iyo Hawo Mohamed Hassan, oo labaduba ah Soomaali qaatay dhalasho Mareykan ah, oo deggenaa Minnseota, ayaa maanta ay xirtay FBI.
Waxaa lagu eedeeyay in ay taageero maaddi ah siiyeen argagixiso.
Waxay labadaa ruux ee haweenka ahi ay kuu eedeysan yihiin in ay lacag u socota Shabaab ay ka ururiyeen Minneapolis iyo Rochester oo labaduba Minnesota ah, iyaga oo irid irid isu marayay marna telefoon iskula xiryay beesha Soomaalida ee Mareykanka iyo canada.
Mararka qaar lacagtaas waxaa la ururinayay iyada oo dadka looga dhigayo in saboolka iyo dadka kale ee baahan lagu gargaarayo.
Iyada oo ay socdan baaritaannadu ayaa arraintani waxay farriin aan mugdi ku jirin u tahay cid kasta oo ka fekereysa in ay ku biirto ama taageerto Shabaab.
Waxaad ogaataa haddii aad sidaas damacsan tahay in aad ku dambeyn karto xabsi Mareykan ama in raqdaaada la dhigi doono goobaha dagaalka ee Soomaaliya.